सरकारले फागुन २७ गते देखि औपचारिक रुपमा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जस अनुशार अहिले चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका सहित २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँ पालिका कार्यान्वयनमा आएका छन् । स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाउने क्रममा केही विवाद तथा बिरोधका आवाजहरु पनि सुनिएका छन् । त्यति मात्रै हैन, सदियौं देखि पछाडि पारिँदै आएको सुदूर पश्चिमका पहाडि जिल्लामा नयाँ तालिम लिइरहेका अधिकृतहरुलाई पठाएर पुरानै हेपाहा प्रवृतिको पुनरावलोकन भयो भन्ने अर्को गुनासो छ । कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापना लगाएत खटनपटन सम्बन्धी उठिरहेका आवाजहरुका सन्दर्भमा के हो वास्तविकता ? ट्रेड युनियन लगायत स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै कर्मचारीबाट आएको असन्तुष्टिबारे मन्त्रालयका सचिब केदार बहादुर अधिकारीसंग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि सिद्धराज उपाध्यायले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ सम्बादको सम्पादित अंशः
स्थानीय तह कार्यन्वयनमा आएको छ, कर्मचारी व्यवस्थापनको पक्ष महत्वपूर्ण रहन्छ ? कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
उनीहरुले आफैं बनाउने होइन, हामीहरुले सहयोग गरिदिने हो । हामी पनि काम गर्छैं, छलफल गर्छौ । व्यवस्थापनको तालिम पनि दिन्छौं । क्षमता अभिबृद्धि गर्छौं । उनीहरुलाई क्षमतावान बनाउँदै लैजान्छौं । एउटा फरक के हुन्छ भने नयाँ मान्छेहरु अलि बढी सृजनशील पनि हुन्छन् । अलिबढी खट्न पनि सक्छन् । उनीहरुबाट फाइदा पनि छ हामीलाई ।
कर्मचारी खटनपटनको सन्दर्भमा भौगोलिक क्षेत्रलाई हेरेर यही मान्छे पठाउने भन्ने होइन । हामीसँग भएको उपलब्धता हेरेर सकेसम्मे सबै निकायहरुमा अधिकृतहरु नै पुगुन् भन्ने प्रयत्न थियो । त्यति हुँदा हुँदै पनि सम्भवतः केही ठाउँहरु अझ छुट भएको हुन सक्छ । सबै ठाउँमा अधिकृत तहको कर्मचारी रहँदा हामीलाई सजिलो गर्छ भन्ने पक्कै हो किनपनि हो भने अहिलेको स्थानीय तह हिजोको जस्तो स्थानीय निकायको काम गर्ने कार्यालय मात्र होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका थुप्रै कामहरु यसैमार्फत परिचालन हुने भएको हुनाले अब कार्यालयको तह अलिकति ठुलो बनाउनु पर्छ । उच्चतहको नै पठाउनु पर्छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि त्यो अहिले तत्कालै सम्भव छैन ।
मैले सुदूरपश्चिमलाई जोड्न खोजें । सदियौंदेखि हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिंदै आएको सूदुरपश्चिममा कर्मचारी पठाउँदा खेरी पनि त्यही आधारमा पठाउने गरिंदै आएको कुरा लुकाएर लुक्दैन, नयाँ नेपालको नयाँ संरचनामा पनि नयाँ तथा अनुभव सम्हाली नसकेकालाई पठाइयो भन्ने गुनासो छ, के हो वास्तविकता ?